‘समाजलाई सही बाटोमा डो¥याउन पूरोहितहरुको महत्वपूर्ण भूमिका’ – Saurahaonline.com
‘समाजलाई सही बाटोमा डो¥याउन पूरोहितहरुको महत्वपूर्ण भूमिका’
चितवन, ३० भदौ । पुरोहित समाज नेपालको दोस्रो वार्षिक साधारण सभा तथा अधिवेशन बुधवार सम्पन्न भएको छ ।
धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्दै कर्मकाण्डमा शुद्धता कायम गर्ने उद्देश्यले यस पुरोहित समाज नेपालको स्थापना गरिएको हो । वि.सं. २०७१ सालमा स्थापना भएको यस पुरोहित समाजमा तीन सय जना भन्दा बढी सदस्यहरु रहेका छन् । यस समाजको चितवन, तनहूँ, लमजुङ, गोर्खा, कास्की, मकवानपुर, बाग्लुङ, धादिङ र स्याङ्जाका पुरोहितहरु मिलेर स्थापना गरिएको हो ।
साधारणसभामा कार्य प्रगति प्रतिवेदन सचिव हरिप्रसाद रेग्मी र आर्थिक प्रतिवेदन कोषाध्यक्ष बद्रीनाथ बाग्लेले प्रस्तुत गरेका थिए । सो अवसरमा महेश संस्कृत विद्यापिठम् देवघाट तनहूँका प्राचार्य डा. गुरुप्रसाद सुवेदी प्रमुख अतिथि रहेका थिए । सो अवसरमा बोल्दै सुवेदीले समाजलाई सही बाटो तर्फ डो¥याउन पुरोहित समाजको नेतृत्वदायी भूमिका हुने बताए ।
हाम्रो बैदिक सनातन हिन्दु धर्महरु लोप हुने अवस्थाहरु सिर्जना भइरहेको अवस्थामा पुरोहितहरुले धर्म संरक्षणको लागि अग्रसर हुन र समाजलाई सुसंस्कृत बनाउन लाग्नुपर्ने बताए । पुरोहित भनेको समाजको धर्मदूत भएको भन्दै समाजलाई धर्म संस्कृतिको आस्था भएपनि राम्रोसँग धर्म संस्कृतिलाई अनुशरण गर्न सिकाउने काम पुरोहित भएको सुवेदीको भनाइ छ । बेदको मन्त्रहरुलाई सिकाउन, राम्रो कर्म गर्न, समाजमा क्रियाशिल बनाउन हिन्दु धर्मले सिकाएको ज्ञानहरु बाँड्न पुरोहितहरु लाग्नुपर्ने सुवेदीले बताएका छन् ।
कार्यक्रममा समाजका उपाध्यक्ष कुलचन्द्र न्यौपानेले स्वागत मन्तव्य राखेका थिए । कार्यक्रम पुरोहित समाज, नेपालको अध्यक्ष युवराज पोखरेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको हो । यसैबीच, समाजको बुधबार नै सम्पन्न अधिवेशनले १५ सदस्यीय नयाँ कर्या समिति चयन गरेको छ । जसको अध्यक्षमा वेदमणि रेग्मी, उपाध्यक्षमा विष्णु जम्मरकट्टेल र भवानी पण्डित, सचिवमा खेम चालिसे, कोषाध्यक्षमा श्रीप्रसाद घिमिरे र सह सचिवमा हरि प्रसाद रेग्मी चयन भएका छन् ।